Akhri: Magacyada Qaar Kamid Ah Dadkii Ku Dhintay Weerarkii Kismaayo – somalilandtoday.com
Akhri: Magacyada Qaar Kamid Ah Dadkii Ku Dhintay Weerarkii Kismaayo
(SLT-Kismaayo)-Gelinkii dambe ee shalay ayaa Rag hubeysan oo ka tirsan Al-shabaab waxaa ay weerar ku Bilowday qarax iyo mid toos ahaa ay ku qaadeen Hotelka Cas-caseey ee ku yaalla Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Weerarka oo qaatay saacado badan ayaa waxaa ka dhashay Khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad isugu jira Wariyeyaal,Qurbojoog,Musharax Madaxweynaha Jubbaland, Ganacsade iyo dad shacab ah, kuwaasi oo dhammaantood ku sugnaa Hotelka.
Dadka ku dhintay weerarka ayaa waxaa kamid ah Weriye Hodan Naaleeye oo aheyd Gabar siweyn looga yaqaanay baraha Bulshad kana timid dalka Canada, Fariid Jaamac oo isna ahaa Seyga Hodan Naaleeye, Maxamed Cumar Sahal Gacmo Dheere oo Wariye ahaa,kaasi oo u shaqeyn jiray TV-ga SBC iyo Radio Ergo.
Sidoo kale dadka dhintay ayaa waxaa ku jiray Musharax Madaxweynanaha maamulka Jubbaland Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo maalmo kahor tagay Kismaayo kana waday olole iyo Mahad Xaji Abdulahi Nuur (Garguurte) oo ahaa Nin Ganacsade ah,kaasi oo saakay Meydkiisa laga helay gudaha Hotelka Cas-caseey.
Dad kale oo shacab ahaa,isla markaana xiliga uu weerarka dhacaayay ku sugnaa gudaha Hotelka ayaa waxaa soo gaaray dhaawacyo kala duwan,kuwaasi oo haatan lagu dabiibayo Isbitaalada ku yaalla Magaalada Kismaayo.
Dhinaca kale Ciidanka amniga Jubbaland ayaa soo badbaadiyay Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo Xildhibaano kamid ah Jubbaland,Siyaasiyiin iyo dad shacab oo sugnaa Hotelka.
Al-shabaab ayaa sheegtay Mas’uuliyada weerarkii ka dhacay Magaalada Kismaayo,waxaana weerarka la soo Afjaray saacad kahor,kaasi oo qaatay saacado badan.